San Htun's Diary: February 2011
မမြင်ဘူးရင် သေခြာကြည့်ထား အဲတာ မြန်မာပြည်က ပိုက်ဆံ။
"ပိုက်ဆံကြီ:က ဟောင်းနေပြီ၊ ပြဲနေပြီ၊ တိတ်နဲ. ကတ်ထားတယ်။ သုံးမရတော.ဘူ:။ လဲပေး။"
"အကြွေ မပါဘူးလား။ အကြွေ မရှိလို့ပါ ။ ဪ ပြဲနေလို့လား။ ရတယ်။ အကြွေဆို ပြီ:ရော။"
"အကြွေ မရှိဘူးတော.ရေ ။ ၅၀ မှတ်ထား။ နောက်နေ့ ဈေးလာတော.မှ ယူ။"
ဒါကတော. မြန်မာပြည်က ဈေးမှာ ကြားရမယ်. မရိုးနိုင်တယ်. စကားတွေပါ။
မြန်မာပြည်မှာ အကြွေရှားပါးနေတာ ကြာပါပြီ။ ပိုက်ဆံ စုတ်နေရင်၊တိတ်ကတ်ထားရင် သုံးလို့ မရတယ်. အခြေအနေကနေ အကြွေဆိုရင် ပြီ:ရော တိတ်ဘယ်လောက်ပဲ ကပ်ထားထား၊ဘယ်လောက်ပဲ စုတ်စုတ် ယူတယ်.ဘဝကနေ အကြွေမရှိလို့ မှတ်ထား နောက်နေ့ ပေါင်းယူတယ်. အခြေအနေတွေ တိုးတက်လာတာပါ။ တို.များ ပိုက်ဆံက ရေစိုခံနော်။ မခံနိုင်ရိုးလား တိတ်အထပ်ထပ် ကပ်ထားလို့လေ။ မြန်မာပြည် ပြန်လာခဲတယ်. သူငယ်ချင်းတယောက် အကိုက မျက်လုံးပြူးပြီ: တအံ.တဩနဲ. ဒီပိုက်ဆံ တကယ်သုံးလို့ရတာ သေချာလို့လားလို့ အမေးကို ကျွန်မတို.မှာ ရယ်လိုက်ကြတာ ဝက်ဝက်ကွဲ။ ပြောင်မြောက်တယ်. ဟာသတခု ကြားရဘိ အလား။
စူပါမားကတ်တွေ၊ ဈေးဆိုင်တွေက သကြားလုံးတို.၊ တစ်ရှူ:တို.ကို အကြွေအဖြစ် အမ်းသလို ကုန်စိမ်: ရောင်းတယ်.သူတွေကလည်: အားကျမခံ သူတို.ကုန်စိမ်:တွေကို ပြန်အမ်:ကြလေရဲ.။ ငရုတ်သီးစိမ်: ၅၀ဖိုး၊ နံနံပင် ၃၀ဖိုး။ အမ်:တယ်. သကြားလုံးတို.ကို စုပြီ: ဈေးဝယ်ရင်တော. လက်မခံပါ။ ဝယ်သူဖက်က နစ်နာလိုက်တာ။
ပိုက်ဆံတွေကလည်: ပုံပါအတိုင်း ရှူကြလော.။ ဘတ်တီးရီးယားများ ပြန်.ပွါးရေး ပိုက်ဆံများများ ကိုင်ပေး။ ဂျာနယ်တစောင်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို ပိုက်ဆံ မကိုင်ခိုင်းသင်.ကြောင်း ရေးရှာပါတယ်။ ဒါပေမယ်.လည်: ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အနုတ်မပေးဘဲ သစ်တယ်. အတန်ကြီ: ပေးလို့ကလဲ မဖြစ်။
Singaporeမှာ ပိုက်ဆံကို တပြားမကျန် ပြန်ပေးတာကို သဘောခွေ့ မနောခွေ့။ အဲဒီမှာ စုတ်နေတယ်. ပိုက်ဆံတောင် မတွေ့ခဲ.ဘူး။ ၅ဆင့် မပေးလို့ ကွန်ပလိမ်:တတ်တယ်. စလုံးတွေ ရန်ကုန်ရဲ. အကြွေပြန်အမ်:စနစ်ကို သိသွားရင် မြန်မာတွေဟာ တယောက်ကိုတယောက် တော်တော် ယုံကြမယ်လို့ မှတ်ချတ်ပြုလိမ့်မယ်။
2010 ဒီဇင်ဘာ ရန်ကုန်ပြန်တုန်းကတောင် မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်က အကြွေမရှိလို့ ၁၀၀ မှတ်ထား၊နောက်နေ့မှ ယူလို့ ပြောတာကို ဥစာခြောက် စန်:ထွန်းက နောက်နေ့ ပြန်လာတောင်းရင် မှတ်မိပါ့မလားနဲ. စိတ်ပူနေတာ။ နောက်နေ့ သွာ:တောင်းတော.လည်: ပေးတာပါပဲ။ သူ့အရပ်နဲ. သူဇာတ်နဲ. ဟုတ်နေ တာပဲ။ တကယ်မဟုတ်တယ်. သူတွေ လာတောင်းရင် သူတို.မှတ်မိပါ့မလားလို့ စိတ်ပူနေတယ်. ကျွန်မကို အမေက ဈေးဆိုတာ သူများထက် အတွက်အချက် တော်တယ်၊ လည်တယ်၊ မှတ်ညဏ်ကောင်းပါတယ် စိတ်ပူမနေနဲ.တဲ။ ဟုတ်သားပဲနော်။ တခါတလေ ၃၅ ကျပ်သားကို Caculater မပါဘဲ တွက်ချက်နေတာ မပြီ:တော.ဘူ: ။ သူတို. တွက်ရင် မြန်မှမြန်။
မြန်မာပြည်က ပိုက်ဆံကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် နိုင်ငံခြားသားကို ပြဖို. ဓာတ်ပုံရိုက်တော. အဖေကတော. ပြောရှာပါတယ်။ မပြပါနဲ. ရှက်စရာကြီ:တယ်.။ တကယ်လည်: ပြရမှာ ရှက်စရာကာင်းလို့ မပြဖြစ်တယ်. ဓာတ်ပုံကို ဘလော့ပေါ်ကနေပဲ ရှက်ရှက်နဲ.ပဲ ပြလိုက်ပါတယ်။
အစိုးရက အတန်ကြီ: ငါးထောင်တန်၊ တစ်သောင်းတန်တွေ ထုတ်မယ်. အစား ဘာလို့ အနုတ်တွေ မထုတ်ပါလိမ့် ?။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ အကြွေ ဒုတ်ခမှ ကင်းဝေးပြီ: သစ်လွင်တောက်ပသော ပိုက်ဆံများကို ကိုင်သုံးနိုင်ကြပါစေ။
ဒီနိုင်ငံက mrt(ဟောင်ကောင်မှာတော. mtr လို့ ခေါ်တယ်.) ရထားကို စီးရတိုင်း တွေးမိတာလေးက ဒီလောက်ကောင်းတယ်. system ကို ရန်ကုန်မှာ ဘာလို့အကောင်အထည် မဖော်တာလဲလို့။ အုပ်ချုပ်သူလူကြီ:များက မသိလေတာလား၊ မမြင်လေဟန်ဆောင်တာလား၊ ဒီsystemနဲ. ရန်ကုန်သားတွေနဲ. မထိုက်တန်လေရော့သလား။ မီးပွင့်မိလို့ စောင့်ရတာလည်: မရှိ၊ ဘူတာတိုင်းရပ်ပြီ: တဘူတာ၁မိနစ်လောက်ပဲ ကြာ၊ ကြိုက်သလောက်စီး ကျသလောက်ပေး၊ လမ်:ကလည်: တဖြောင့်တည်:ဆိုတော. ကားလိုမမူးတယ်. mrtကို သဘောအကျဆုံး။ မတ်တပ်ရပ်စီးပြီ: စာအုပ်ဖတ်နေလို့ ရတယ်။ ရထားယိမ်:ရင်တောင် ကိုင်စရာတွေက အများသား။ ရန်ကုန်က ဘတ်စ်ကားတွေလို ကိုင်စရာကွင်းတန်:တွေက အမြင့်ကြီ:မှာ မထားဘဲ လူအရပ်မှီတယ်.နေရာမှာထားတော. မျောက်လွှဲကျော်လို ဟိုလှမ်:ဆွဲဒီလှမ်:ဆွဲ ဖြစ်မနေဘဲ အိမ်ဒရေ ရရ စမတ်ကျကျပေါ့။ ကြိုက်သလောက်စီး ကျသလောက်cardထဲက ဖြတ်တာဆိုတော. စပယ်ရာတွေ ပိုက်ဆံအကြွေတွေကို မမြင်အောင်ဝှက်ထားပြီ: အကြွေမရှိဘူးဆိုပြီ: ပိုတဲ.ပိုက်ဆံ ပြန်မပေးတယ်.ဒုတ်ခ၊ အကြွေဆောင်ထားလို့ အော်ငေါက်ခံရတယ်. ဒုတ်ခ၊ ကျသင့်တာထက် ပိုတောင်းလို့ မကျေမနပ်ဖြစ်ရတယ်. ဒုတ်ခ၊ "မှတ်တိုင်မရောက်ခင် ကြိုတိုးတား၊ နီးမှပါတယ်လို့ မအော်နဲ.၊ မှတ်တိုင် ကြိုမေးထားတယ်နော်"၊ "ဆင်၂ကောင် ဖင်ထောင်ကလို့ ရတယ် အထဲကိုဝင်၊ အပေါက်မပိတ်နဲ."လို့ အော်ငေါက်ပြီ: ကားမရပ်ခင် အတင်းတွန်းချ ကားမထွက်ခင် အတင်း ဆွဲတင်။ ကားချင်းဖိုက်ရင် ဒုံးပျံတို.ရဲ. အမြန်နှုန်းနဲ. အသက်ကိုဖက်နဲ.ထုပ်ပြီ: ဘုရားတရားမမေ့အောင် ရန်ကုန်က ဘတ်စ်ကားများကသာ စွမ်:ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။ ကားပေါ် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ.ဆုံရင် လုပြီ:ကားခပေးရင် စပယ်ရာက "၂ယောက်လုံးဆီက ယူမှာနော်"လို့ စတတ်သေးတယ်။
နိုင်ငံတိုင်း (မြန်မာပြည်က လွဲရင်) mrt ရှိတယ်။ mrt က လူအများကြီ:ကို သယ်ဆောင်ပေးနိုင်တော. လေထုထဲကို ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ. ထုတလွှင့်တာနည်:တော. သဘာဝပတ်ဝန်:ကျင်ထိန်:သိမ်:ရေအတွက် ကောင်းတယ်။ အစိုးရကလည်: ရထားစီးဖို. အားပေးတယ်။ "Go Green by SMRT" တဲ.။
singapore လို သောက်စရာရေတောင် မရှိတယ်.နိုင်ငံကို အရှေ့တောင်အာရှမှာ အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်အောင် နစ်ပေါင်း၄၅နှစ်အတွင်း Lee Kuan Yew က ပြောင်းလဲပေးခဲ.တယ်. ။ ကျွန်းသစ်၊သဘာဝဓာတ်ငွေ.၊ရေနံ၊ပတ္တမြား၊ကျောက်စိမ်: သဘာဝသယံဇာတတွေ ပေါကြွယ်လှပါတယ် ဆိုတယ်. မန်မာနိုင်ငံကတော. အဆင်းရဲဆုံ:နိုင်ငံစာရင်းမှာ လှည်.ပတ်နေရာယူနေတာ ကြာလှပေါ့။ သူများနိုင်ငံတွေ တိုးတက်တာမြင်ရတိုင်း ကိုယ်.မြန်မာနိုင်ငံဆို ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲဆိုတယ်. အတွေးနဲ.ပေါ့။ စစ်ဗိုဟ်ချုပ်တွေကို singapore ကို အုပ်ချုပ်ခိုင်း၊ Lee Kwan Yew ကို မြန်မာပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခိုင်းရင် ဘာလိုဖြစ်သွားမယ်လို့ မိတ်ဆွေတို. ထင်ပါသလဲ။